ထမင်းကြမ်းကို ပြန်နွေးစားခြင်းက အစာအဆိပ်သင့်စေနိုင်လား..?.. - Barnyar Barnyar
ထမင်းကြမ်းကို ပြန်နွေးစားခြင်းက အစာအဆိပ်သင့်စေနိုင်လား..?..
October 28, 2021 KNOWLEDGE 0
ထမင်းကြမ်းစားတတ်တာဟာ မြန်မာတို့ရဲ့ ဓလေ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နံနက်စောစော ပဲပြုတ်လေးနဲ့ ထမင်းကြမ်း စားလို့ရအောင် ညစာကို ပိုချက်ကြလေ့ရှိပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့နံနက်မှာ ညကကျန်နေတဲ့ ထမင်းကြမ်းကို နွှေး၍ဖြစ်စေ၊ ကြော်၍ဖြစ်စေ နံနက်စာအဖြစ် စားသုံးတတ်ကြပါတယ်။
ဒီလိုမဟုတ်လည်း ဆိုင်ကနေ ဝယ်လာတဲ့ ထမင်းကို ချက်ခြင်းမစားဖြစ်ပဲ နောက်မှ ပြန်လည်နွှေးစားတတ်ကြတာမျိုးလည်း ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ချက်ပြုတ်(ကျက်)ပြီးသား ထမင်းကို တစ်ဖန်ပြန်လည်နွေးစားခြင်းက အစာအဆိပ်သင့်မှု ဖြစ်စေနိုင်သလားဆိုတာကို ကျွမ်းကျင်သူများက သုတေသနပြုထားကြပါတယ်။
ဗြိတိသျှ သုတေသီများ၏ အဆိုအရ ကျက်ပြီးသား ထမင်းကို တစ်နာရီအတွင်း မစားသုံးနိုင်သေးဖူးဆိုပါက ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ထားတဲ့ ထမင်းကိုလည်း ၂၄ အတွင်းစားသုံးသင့်ကြောင်းနှင့် တစ်ကြိမ်သာ ပြန်လည်နွှေးစားသင့်ကြောင်း အကြံပြုထားပါတယ်။
ဆန်တွေရဲ့ သဘာဝအရ မည်မျှပင် စင်ကြာ်အောင်ဆေးဆေး စပါးမျိုးစအမှုန်အမွှားလေးများ ပါရှိကြပါတယ်၊ အဲဒါတွေကနေ ဘက်တီးရီးယား ပေါက်ပွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအမှုန်အမွှားလေးတွေဟာ ဆန်ကနေ ထမင်းအဖြစ် ကျက်သွားသည့်တိုင်အောင် အသက်ရှင်နိုင်ကြပြီး စနစ်တကျ မသိမ်းဆည်းရင်တော့ အစာအဆိပ်သင့်မှုကို ဖြစ်စေပါတယ်လို့ အဟာရဗေဒပညာရှင် Fiona Hunter က ဆိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် ထမင်းကို ပြန်နွှေးစားမယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားရင် စနစ်တကျသိမ်းဆည်းဖို့ လိုအပ်ကြောင်း၊ အကယ်၍ ထမင်းကိုချက်ထားပြီး အခန်းအပူချိန်မှာပဲ ထားမယ်ဆိုရင် စောစောက ပြောတဲ့ မျိုးစလေးတွေကနေ ဘက်တီးရီယားများ အဆတိုးပျံ့နှံ့ ပေါက်ပွားနိုင်ကြောင်း၊ အဲဒီကနေတစ်ဆင့် အဆိပ်ဖြစ်ပြီး စာသုံးမိပါက အော့အန်ပြီး အစာအဆိပ်သင့်စေနိုင်ကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောဆိုပါတယ်။
ကျက်ပြီးသားထမင်းကို အခန်းအပူချိန်မှာပဲ ကြာကြာထားလေလေ ဘက်တီးရီးယား ထမင်းထဲမှာ ပိုပျံ့လေလေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ထမင်းချက်ပြီး တစ်နာရီအတွင်း မစားနိုင်သေးဘူးဆိုပါက ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ သိမ်းထားတာအကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ် ဟင်းအရင်ချက်ပြီး စာခါနီးမှ ထမင်းချက်တာက ပိုပြီးစိတ်ချရသလို ပူပူနွေးနွေးလည်း စားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ညမနက်စာ တစ်ခါတည်းပေါင်းချက်ခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ပါ၊ ထမင်းပိုသွားတဲ့အခါမှာလည်း ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ထည့်သိမ်းဖို့ မမေ့ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ထမငျးကွမျးကို ပွနျနှေးစားခွငျးက အစာအဆိပျသငျ့စနေိုငျလား..?
ထမငျးကွမျးစားတတျတာဟာ မွနျမာတို့ရဲ့ ဓလတေ့ဈခုလညျးဖွဈပါတယျ။ နံနကျစောစော ပဲပွုတျလေးနဲ့ ထမငျးကွမျး စားလို့ရအောငျ ညစာကို ပိုခကျြကွလရှေိ့ပါတယျ။ နောကျတဈနနေံ့နကျမှာ ညကကနျြနတေဲ့ ထမငျးကွမျးကို နှေး၍ဖွဈစေ၊ ကွျော၍ဖွဈစေ နံနကျစာအဖွဈ စားသုံးတတျကွပါတယျ။
ဒီလိုမဟုတျလညျး ဆိုငျကနေ ဝယျလာတဲ့ ထမငျးကို ခကျြခွငျးမစားဖွဈပဲ နောကျမှ ပွနျလညျနှေးစားတတျကွတာမြိုးလညျး ဖွဈလရှေိ့ပါတယျ။ ဒီလိုမြိုး ခကျြပွုတျ(ကကျြ)ပွီးသား ထမငျးကို တဈဖနျပွနျလညျနှေးစားခွငျးက အစာအဆိပျသငျ့မှု ဖွဈစနေိုငျသလားဆိုတာကို ကြှမျးကငျြသူမြားက သုတသေနပွုထားကွပါတယျ။
ဗွိတိသြှ သုတသေီမြား၏ အဆိုအရ ကကျြပွီးသား ထမငျးကို တဈနာရီအတှငျး မစားသုံးနိုငျသေးဖူးဆိုပါက ရခေဲသတ်ေတာထဲထညျ့ထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ရခေဲသတ်ေတာထဲ ထညျ့ထားတဲ့ ထမငျးကိုလညျး ၂၄ အတှငျးစားသုံးသငျ့ကွောငျးနှငျ့ တဈကွိမျသာ ပွနျလညျနှေးစားသငျ့ကွောငျး အကွံပွုထားပါတယျ။
ဆနျတှရေဲ့ သဘာဝအရ မညျမြှပငျ စငျကျွာအောငျဆေးဆေး စပါးမြိုးစအမှုနျအမှားလေးမြား ပါရှိကွပါတယျ၊ အဲဒါတှကေနေ ဘကျတီးရီးယား ပေါကျပှားနိုငျပါတယျ။ ဒီလိုအမှုနျအမှားလေးတှဟော ဆနျကနေ ထမငျးအဖွဈ ကကျြသှားသညျ့တိုငျအောငျ အသကျရှငျနိုငျကွပွီး စနဈတကြ မသိမျးဆညျးရငျတော့ အစာအဆိပျသငျ့မှုကို ဖွဈစပေါတယျလို့ အဟာရဗဒေပညာရှငျ Fiona Hunter က ဆိုပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ထမငျးကို ပွနျနှေးစားမယျလို့ ရညျရှယျထားရငျ စနဈတကသြိမျးဆညျးဖို့ လိုအပျကွောငျး၊ အကယျ၍ ထမငျးကိုခကျြထားပွီး အခနျးအပူခြိနျမှာပဲ ထားမယျဆိုရငျ စောစောက ပွောတဲ့ မြိုးစလေးတှကေနေ ဘကျတီးရီယားမြား အဆတိုးပြံ့နှံ့ ပေါကျပှားနိုငျကွောငျး၊ အဲဒီကနတေဈဆငျ့ အဆိပျဖွဈပွီး စာသုံးမိပါက အော့အနျပွီး အစာအဆိပျသငျ့စနေိုငျကွောငျး ဖွညျ့စှကျပွောဆိုပါတယျ။
ကကျြပွီးသားထမငျးကို အခနျးအပူခြိနျမှာပဲ ကွာကွာထားလလေေ ဘကျတီးရီးယား ထမငျးထဲမှာ ပိုပြံ့လလေေ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ ထမငျးခကျြပွီး တဈနာရီအတှငျး မစားနိုငျသေးဘူးဆိုပါက ရခေဲသတ်ေတာထဲမှာ သိမျးထားတာအကောငျးဆုံး ဖွဈပါတယျ။
ဒါမှမဟုတျ ဟငျးအရငျခကျြပွီး စာခါနီးမှ ထမငျးခကျြတာက ပိုပွီးစိတျခရြသလို ပူပူနှေးနှေးလညျး စားလို့ရမှာဖွဈပါတယျ။
ညမနကျစာ တဈခါတညျးပေါငျးခကျြခွငျးကို ရှောငျကဉျြပါ၊ ထမငျးပိုသှားတဲ့အခါမှာလညျး ရခေဲသတ်ေတာထဲမှာ ထညျ့သိမျးဖို့ မမဖေို့ လိုအပျပါတယျ။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း သိထားသင့်တဲ့ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော် အံ့ဖွယ်(၉)ပါး
Visit Today : 724
This Year : 59014
Total Visit : 59014
Hits Today : 2485
Total Hits : 336181